कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र रहेन – एनपी साउद (नेता, नेपाली कांग्रेस) – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र रहेन – एनपी साउद (नेता, नेपाली कांग्रेस)
० वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले हरेक पाइलामा भांजो हाल्न खोजेजस्तो देखिन्छ नि, यसले निर्वाचित सभापतिलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छैन र ?
– शेरबहादुर देउवाले भांजो हाल्यो भन्नु गलत हो । पार्टीको विधान र सहमतिका कुरा गर्दै भांजो हुन्छ भने म त्यसलाई केही भन्दिनं । होइन भने शेरबहादुर देउवाले सभापति कोइरालालाई सल्लाहबमोजिम पार्टीलाई अगाडि बढाऔं भन्दै आउनुभएको छ । बरु सभापतिजीले म निर्वाचित सभापति भएकाले मेरो चाहनाबमोजिम काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र एक्लै हिंड्न खोजिरहनुभएको छ ।
० कहिले तरुण, विद्यार्थी त कहिले विभाग भन्दै देउवाले खाली खोचे थाप्ने गरेको आरोप छ नि, तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
– नेपाली काङ्गे्रस प्रजातान्त्रिक पार्टी भएकाले वाद–विवाद, बहस हुनु स्वाभाविक हो । पार्टीलाई एकल सोचले होइन सबैको चिन्तन र छलफलअनुसार अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । अहिले मुलुक अत्यन्त विषम स्थितिबाट अघि बढिरहेको छ, यस्तो बेला सभापतिजीले पार्टीका सबै साथीसंग सल्लाह गरेर अघि बढ्नुको सट्टा विधानविपरीत निर्णय गर्दै अघि बढेकोले हामीले ट्रयाकबाट हिंड्न आग्रह गरेका हौं । खोचे थाप्ने काम गरेका छैनौं ।
० सभापतिप्रति तपाईंहरू आक्रामक शैलीले प्रस्तुत हुने र बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने प्रक्रियाले काङ्गे्रसलाई कहां पु¥याउला ?
– हाम्रो कामना र चाहनाअनुसार सभापतिले प्रभावकारी रूपले काम गर्नुभयो भने त्यसको प्रभाव सिङ्गो मुलुकलाई पर्छ भन्ने हो । अहिले जनताले काङ्गे्रसको नेतृत्व के गर्छ भनेर हेरिरहेका छन् । यस्तो बेला तरल राजनीतिलाई सही दिशा दिनका लागि नेपाली काङ्गे्रसमाथि चुनौती आइपरेको छ । पार्टीभित्र तेरो, मेरो नभनीकन यो चुनौतीलाई पार गर्नुपर्नेमा सभापतिजीले विधानविपरीत आफ्नै ढङ्गले अघि बढेका कारण हामी बाध्य भएर नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हौं । यतिखेर काङ्गे्रसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने कुरा गरे पनि सत्ता चलाउने सामथ्र्य र कौशल दुवै गुमाएको त होइन भनेर जिज्ञासा प्रकट हुन थालेको छ ।
० बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउने र निरङ्कुश शैली अपनाइरहेको बेला त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्नेमा घरझगडामै अल्मलिनु काङ्गे्रसका लागि कति सुहाउने कुरा हो ?
– तपाईंले गरेको प्रश्न सत्य हो । योबेला हामी एकीकृत माओवादीको सर्वसत्तावादका विरुद्ध एक भएर लाग्नुपर्ने थियो । तर, दुर्भाग्य हामी आपसी किचलोमै रुमलिएका छौं । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा काङ्गे्रसजस्तो पार्टी आन्तरिक झगडामा अल्मलिन नहुने थियो । नेतृत्वले झगडा मिलाउनभन्दा पनि त्यसलाई मलजल गरेर अझ बल्झाउन लाग्नु अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । सिद्धान्तमा काङ्गे्रस एक छौं र सहमत पनि छौं । नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति हाम्रा गुनासा भने फरक छन् । महाधिवेशनमा एकले हार्ने र अर्कोले जित्ने अवश्य भयो । जितेर आएको नेतृत्वलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि सत्य हो । तर, सहयोग गर्ने वातावरण नै नबनाएपछि के गर्ने ? पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई बाहिर जान नदिई मिलाउने काम नेतृत्वको हो । यहां त्यस्तो हुन नसकेका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक झैझगडा भएको हो ।
० प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र अप्रजातान्त्रिक गतिविधि भएको भन्न मिल्छ ?
– हामी अरू पार्टीलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउंछौं तर दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ हामै्र पार्टी आन्तरिक प्रजातन्त्रमा कम्युनिस्टहरूभन्दा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । हिजो हामीले अधिनायकवादी भनेर भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्रको ज्यादै अभ्यास भएको पाइन्छ । जन्मदै प्रजातान्त्रिक बनेर जन्मिएको काङ्ग्रेस पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर छ भनेर भन्नु लाजमर्दो विषय हो तर बाध्यताबस सत्य कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ ।
० पार्टीमा यति धेरै युवा नेतृत्वमा आउनुभएको छ नेतृत्वलाई घचघच्याउन सक्नुहुन्न ?
– मान्छे उमेरले मात्र युवा भएर हुंदोरहेनछ, उसको विचार पनि युवा हुनुपर्छ । गिरिजाबाबु यो धर्तीमा रहंदासम्म सधैं युवा रहनुभयो । तर, यहां भएका कतिपय युवाका विचार वृद्ध छन् । त्यसैले विचार परिवर्तन नभएसम्म केही गर्न सकिंदो रहेनछ । हाम्रा नेताहरू पनि पुरानै कायैशैलीबाटै अगाडि बढ्न खोजिरहनुभएको छ कि भन्ने भान हामीमा पर्न थालेको छ । नयां पुस्ताको नयां सोच र चिन्तनलाई नेतृत्वले आत्मसात् नगरेकै कारण पनि यसरी विवाद बढेको हो ।
० नयां पुस्ता पनि त गुट–उपगुटमा लागेको छ नि, होइन र ?
– हामीले गुट–उपगुटमा लागेर होइन कि पार्टीभित्र देखिएको ठाडो चिरालाई हटाएर तेस्रो नेतृत्वको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौं ।
० पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्न तपार्इंहरूको पनि त भूमिका हुन्छ नि, के गर्नुभएको छ ?
– नेतृत्वले प्रायोजित रूपमा ठाडो हिसाबले लैजाने काम गरिरहेको छ । तपार्इंले भनेझैं गुटबन्दीबाट पार्टीलाई मुक्त पार्न हामी युवाको कांधमा जिम्मेवारी छ, त्यो सत्य हो । युवाहरू पनि विभिन्न खेमामा विभाजित भएको सबैले देखेको कुरा हो । दुई धारमा विभाजित युवालाई मिलनबिन्दुमा ल्याएर एक बनाएर नेतृत्वलाई कडा दबाब दिने हाम्रो अभियान चलिरहेको छ । हाम्रो त्यो अभियान र चाहना सोचअनुसार पूरा हुन सकेको छैन ।
० वरिष्ठ नेता देउवालाई उकास्नेमा तपाईं पनि पर्नुहुन्छ भनिन्न्छ नि सत्य के हो ?
– मलगायत दुवैतर्फका केही युवा साथीहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा मिलाउन लागिरहेका छौं । हाम्रो पार्टीमा एउटा पुरानो रोग के छ भने जसले निस्वार्थ एकताको लागि भूमिका खेल्छ उसैलाई निरुत्साहित गर्ने र एउटा छाप लगाइने गरिन्छ । कसैले इमानदारी साथ नेताहरूलाई मिलाउन खोजिरहेको छ भने सडकमा उसका विषयमा नानाथरीका टिप्पणी गर्ने ऐंजेरूहरूका कारण पनि पार्टी सोचेजति एकता कायम गराउन सकिएको छैन । तपाईंले प्रश्न गरेकै उत्तर दिनुपर्दा जसले काङ्गे्रसका नेताहरूलाई हजुरिया गरेर अघिपछि गरेका छन् त्यस्ताले यस्तै कुरा गर्दै हिंडेको मैले पनि सुन्ने गरेको छ ।
० नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा गिरिजाबाबुको आवश्यकता खट्किएको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो, सत्य हो ?
– गिरिजाबाबु रहंदासम्म उहांले सधैं एउटा लक्ष्यलाई निर्धारण गरेर अघि बढ्नुहुन्थ्यो । त्यसैले त्यतिखेर उहांको अभाव खड्किएको यथार्थ हो । लक्ष्यअनुसार त्यो प्राप्त गर्नका लागि गिरिजाबाबु कसैसंग सम्झौता नगरी तम्तयारी अवस्थामा अघि बढ्नुहुन्थ्यो र त्यो पूरा पनि हुन्थ्यो । यतिखेर लक्ष्यबिना तयारी गर्न खोजिएकोजस्तो देखिएकाो छ । यस्तो बेला गिरिजाबाबुको आवश्यकता कताकता खड्किएको सत्य हो ।
० अन्त्यमा भन्दिनुस् त काङ्ग्रेसभित्रको किचलो समाप्त पार्न के गर्नुपर्ला ?
– सभापति सुशील कोइरालाले गणेशप्रवृत्तिका मान्छेका कुरा नसुनेर चौडा छाती बनाएर आउने हो भने एक मिनेटमा काङ्ग्रेसभित्रको किचलो समाप्त भएर जान्छ । शास्त्रीय धुन र कुटिल बोलीले पार्टी एक हुंदैन भन्ने कुरालाई सभापतिले बुझ्नुभएकै छ । तर, त्यसलाई अब व्यवहारमा उतारेर पार्टी एक हुनुपर्छ । काङ्ग्रेस एक नभएसम्म मुलुकको संस्कारले पनि निकास पाउन सक्तैन ।
प्रस्तुति : महेन्द्र पाण्डे
१२ भाद्र २०६९, मंगलवार १९:५३ मा प्रकाशित